दुर्व्यसनी निगरानी गर्ने उपयुक्त समय लकडाउन : डिएसपी बस्नेत - Everest Daily News
दुर्व्यसनी निगरानी गर्ने उपयुक्त समय लकडाउन : डिएसपी बस्नेत
धरान। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुख डिएसपी ज्ञानेन्द्रबहादुर बस्नेत भन्छन् “लागुऔषध दुर्व्यसनीहरुलाई सुधार्ने र निर्मुलीकरण गर्न उपयुक्त समय भनेकै लकडाउन हो । लकडाउनले गर्दा उनीहरू चौबिसै घण्टा परिवारको निगरानीमा हुन्छन् ।”
लागुऔषधको समस्या भयावह बन्दै गएको धरानमा हरेक दिन जसो लागु औषध प्रयोगकर्ता र लागु औषध प्रहरीले पक्राउ गर्ने गर्दथ्यो । तर अहिले भने प्रहरीले लागु औषध प्रयोगकर्ता र लागुऔषध दुवै पक्राउ गरेको छैन । यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको लकडाउन हो ।
लकडाउनको बेला लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू परिवारको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका कारण लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुले पहिले जस्तो लागुऔषध प्रयोग गर्ने नगरेको पाइएको प्रहरीको दाबी छ ।
डिएसपी बस्नेतका अनुसार लागु औषध दुर्व्यसनी भएको घरका सदस्य यति तनावमा हुन्छन्, उनीहरूलाई राती निद्रा पर्दैन, न उनीहरू खुलेर समाजमा हिँडडुल गर्न नै सक्छन् ।
अपराधको जरो गएर लागु औषधमै जोडिन्छ । लागु औषध दुर्व्यसनीका परिवारका सदस्यहरू आफैले प्रहरीले नै लगेर थुनिदिओस् भन्ने चाहना राख्ने गरेको बताउँदै डिएसपी बस्नेतले भने, ’लागु औषधले हाम्रो समाज भित्रभित्रै खण्डित भइरहेको छ ।’ त्यसैले लकडाउनमा आफ्ना छोराछोरी लागुऔषध प्रयोग गरेको छ की छैन भनेर बुझ्न प्रयास गरे पत्ता लगाउन सकिने उनी डिएसपी बस्नेत बताउँछन् ।
लागुऔषध प्रयोगकर्ता कसरी चिन्ने ?
लागुऔषध प्रयोगकर्ता हुन भनेर चिन्न सक्ने केही लक्षण छन् । उनीहरूको आज एउटा साथी हुन्छ । अनि भोलि अर्को साथी परिवर्तन गर्छन् । उनीहरूको शरीरमा एक प्रकारको छुट्टै गन्ध आउँछ ।
आँखाहरू रातो हुन्छ । कम्मर देखी मुनीको शरीरको भाग सुक्दै जान्छ । कहिले काहीँ जताततै लड्ने भएकाले अस्वाभाविक चोटहरू लिएर आउँछन् । नियमित काम नगर्ने जस्तै कलेज जाने विद्यार्थी हो भने कलेज नजाने, एकदम एकान्तमा बस्न रुचाउने जस्तो परिवार सामूहिक रूपमा बसेको छ भने अर्को कोठामा गएर बस्ने ।
अनेक बहाना बनाएर एकै छिन है।।।।।तल पुगेर आउँछु वा दवाई लिएर आइहाल्छु भनेर पनि बाहिर जान खोज्छन् । सेवनकर्ताहरूको मुख सुकी रहने भएकाले गुलियो खानेकुराहरू खान खोज्ने केही खान नपाएमा मुखले निकोटिन खोज्ने भएकाले दूधको चियामा धेरै रङ कडा र चिनी कडा पारेर खाने र परिवारसँग सम्पर्क नै नहुने र बढी एकान्त मन पराउँछन् ।
त्यसैले आफ्ना छोराछोरीको नङ, ब्याग,सिरानी, दराजहरू पनि हेर्न सकिन्छ । उनीहरूले कारोबार नगरे पनि सेवन गर्न भनेर राख्छ । त्यसरी उनीहरूलाई चिन्न सकिन्छ ।
दुर्व्यसनी किन बढ्छन् ?
बढ्दो बेरोजगारीका कारण धरानमा लागु औषध दुर्व्यसनीहरु बढेका हुन । प्रहरीका लागि लागुऔषध दुर्व्यसनीहरु प्रमुख समस्या बनेका थिए ।
सहरी क्षेत्रका स्कुल तथा कलेजका युवायुवतीहरू लागु औषधको कारोबार तथा दुर्व्यसनमा फस्ने गरेको पाइएको छ । निम्न र उच्च वर्गका भन्दा पनि मध्यम वर्गका युवा पुस्तामा लागुऔषधको कुलतमा बढी फस्ने गरेको पाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
लागुऔषध कानुनले नै बन्देज गरिसकेको छ । धरानका युवापुस्ता यसैमा फसेका छन््। सामान्य प्रकारका लागुऔषध ट्याब्लेट र चक्की खाने गरेका छन् ।
लकडाउनमा लागुऔषध दुर्व्यसनीहरु सुधार्न सकिने प्रहरीको दाबी छ । निर्मुलीकरण गर्न प्रहरीलाई सहयोग गरौँ । नागरिकहरु पनि बिना बर्दीका प्रहरी नै हुन् त्यसैले लागुऔषध एउटा दलदल अवस्था हो । जहाँ पस्न सजिलो हुन्छ तर, निस्कन गाह्रो भएकाले परिवारमा दुर्व्यसनीहरुको निगरानी गरी सम्झाएर , वा सुधार केन्द्रमा राखेर भए पनि हामी आफैले सभ्य तथा आदर्श समाजको निमार्ण गरौँ डिएसपी बस्नेतले भने ।
लागुऔषध प्रयोगकर्ता बढी अपरारिधक क्रियाकलाप संलग्न भएको प्रहरी स्रोतले जनाउँछ दुर्व्यसनी जब कम हुन्छन् तब समाजमा अपराधहरू बढ्दैनन् बस्नेतले भने ।
गत आर्थिक वर्षको धरानको लागुऔषधको अवस्था
गत २०७६र०७७ को असार देखी वैशाख १५ गते सम्ममा धरानमा लागुऔषधका ७९ मुद्दा चलेको छ । जसमा १ सय ४ पुरुष १ महिला पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
सो क्रममा एभिल ८३८ एम्पुल, लुपिजैसिक ८३८ एम्पुल , डाईजेलाव ८३८ एम्पुल, फेनारगन ३४ एम्पुल, डाईलेक्स डिसी २८६ बोतल, नाईट्रोसन १०२५ ट्याब्लेट, खैरो हिरोइन ९१।७९० मिलिग्राम, गाँजा १८ केजी ७५० ग्राम, चरेस १।८ ग्राम, स्पास्मो १५८२०, प्रोक्सिभन कैप्सूल बरामद गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७र०७८को धरानको लागुऔषधको अवस्था
चालु आर्थिक वर्ष २०७७ सालको श्रावण महिना देखी २०७८ सालको ज्येष्ठ ०३ गते सम्मको जम्मा लागु औषध मुद्दा सङ्ख्या ५२ रहेको छ ।
यस मुद्दामा संलग्न प्रतिवादी पुरुष ६९ र महिला४ जना गरी ७३ जना पक्राउ परेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यस मुद्दामा फरार प्रतिवादी ४ जना रहेका छन् । जसमा पुरुष ३ जना र महिला १ फरार भएका हुन् । धरान प्रहरीले यस अवधिमा एभिल ६२ एम्पुल , लुपिजैसिक ९० एम्पुल, डाईजेल्याब ९२ एम्पुल, फेनारगन ९० एम्पुल,डाईलेक्स डि।सी। १ सय ५७ बोतल, नाईट्रोसन ६ सय ८२ चक्की, ब्राउन सुगर ९खैरो हेरोईन० १ सय ५२ ग्राम ५ सय २५ मिलिग्राम, गाँजा २३ किलो ८ सय १५ ग्राम,स्पास्मो प्रोक्सिभन लागु औषध ३ हजार ४ सय ४६ क्याप्सुल र औषधि व्यवस्था विभाग पठाएको ४ हजार ५ सय ९ गरी जम्मा ८ हजार ३ सय ४१ क्याप्सुल र लेबल नखुलेको ९ एम्पुल, १४ ट्याब्लेट बरामद गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ७९ वटा लागुऔषधका मुद्दामा १ सय ५ जना पक्राउ परेका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा ५२ वटा मुद्दामा ७३ जना पक्राउ परेका छन् । गत आर्थिक वर्ष र यस वर्षको तथ्याङ्क दाँजेर हेर्दा कारोबारमा कमी आएको छ । कमी आउनुको कारण लकडाउन हो ।
त्यसैले आफ्नो परिवारमा दुर्व्यसनी भए अभिभावक आमाबुबा भए छोराछोरीले खबरदारी गरौँ र छोराछोरी दुर्व्यसनी भए आमाबुबाले खबरदारी गरी प्रहरीलाई सहयोग गर्न डिएसपी बस्नेतले आग्रह गरे । उनले यसबारे कुनै कुरामा समस्या र प्रश्न भए आफूलाई वा धरान प्रहरीलाई फोन गरेर पनि परामर्श लिन सकिने बताएका छन् ।